बत्ति निभाउन पनि कुलमान नै आउनुपर्ने हो ? - Everest Dainik - News from Nepal
बत्ति निभाउन पनि कुलमान नै आउनुपर्ने हो ?
काठमाडौं, माघ १७ । कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेदेखि लोडसेडिङ भएको छैन् । जेठदेखि देशभर लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा हुँदै छ । प्राधिकरणले बेला बेलामा सूचना प्रकाशन गरेर कम खपत हुने विजुजी प्रयोग गर्न गरेको आग्रहलाई आम नागरिकले पालना गरेपनि सरकारी निकायबाटै असहयोग भएको प्रमाण फेला परेको छ ।
खुमलटारमा रहेको जैविक प्रविधि महाशाखाको दृश्यले यही देखाउँछ । सोमबार बिहान १० बज्नै लाग्दा महाशाखामा कर्मचारीको चहलपहल सुरु भइसकेको थियो । कोही हाजिर गरेर घाम तापीरहेका थिए । कोही पत्रिका पढ्दै थिए । तर, मूल ढोका छेउ माथितिरको ठूलो बत्ति बलिरहेकोतर्फ कसैले चासो नै देखाएनन् । बत्तिको फोटो खिचेको देखेपछि बाहिर रहेका एकजना कर्मचारीले हत्तपत्त भित्र पसेर स्वीच अफ गरे ।
याे पनि पढ्नुस कुलमान-जनार्दन अर्थात एक कुशल व्यवस्थापक, जसले हटाए लोडसेडिङ
कम विद्युत् कम खपत हुने चिम भएपनि दिउँसै यसरी बत्ति बल्दा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्राधिकरणको अभियान प्रभावित हुन सक्छ । सरकारी निकायले त झन् यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो ।
विद्युत् खपत कम गर्न र अनावश्यक रुपमा बिजुली खेर जान नदिन आम उपभोक्ता सचेत भैरहँदा सरकारी निकाय चाहिँ गम्भीर हुन पर्दैन ? चौबीसै घण्टा बिजुली बाल्ने अभियानमा लागेका कुलमान घिसिङले नै सरकारी निकायको अनुगमन गर्दै बत्ति निभाई हिँड्नपर्ने हो र ?
याे पनि पढ्नुस जनार्दन–कुलमानको सँयुक्त घोषणा–‘जेठ महिनाभित्र नेपाल लोडसेडिङ मुक्त’
तस्वीर स्रोत : उज्यालो अनलाईन